Laamaha amniga oo baaraya dhacdo naxdin leh oo Muqdisho ka dhacday | Dhacdo
Home Wararka Maanta Laamaha amniga oo baaraya dhacdo naxdin leh oo Muqdisho ka dhacday
Booliska Somaliya ayaa sheegay inay wadaan baaritaan ay ku ogaanayaan ciddii ka dambeysay dilka laba carruur ah oo wada dhashay, meydadkoodana saakay laga helay duleedka Magaalada Muqdisho.
Meydadka wiilka iyo gabadha walaalaha ahaa ayaa laga helay Tabeellaha Sheekh Ibraahim, iyadoona falkaasi loo soo qabtay laba qof, oo ay ku jirto hooyadii carruurta dhashay.
Afhayeenka Ciidanka Booliska, Cabdifitaax Aadan Xasan ayaa sheegay in si arxandarro ah loo dilay carruurtaasi, baaritaankiina uu bilowday.
“Labadaan carruurta ah saakay warkooda markii uu soo gaaray booliska, oo ay goobta ku baxeen waxay la kulmeen wax indho xumo ah, waxay la kulmeen wax nin walbo oo damiir leh uusan arki karin. Mid ka mida qoorta waxaa uga duubneyd bac, afkana ciid ayaa looga buuxshay, taas oo kuu muujin karta in la daldalay carruurtaas, oo loo diiday inay xitaa qayliyaan.” Ayuu yiri Afhayeenka.
Afhayeenka Booliska Somaliya ayaa yiri “Dhacdadaasi waxaa gaystay shakhsi wuxuushnimo ku kacay oo xaalad bani’aadanimada ka baxsan ku dhaqaaqay.”
Waxa uu xaqiijiyay in falkaasi loo soo qabtay laba qof oo isugu jira hooyadii carruurta dhashay iyo saygeeda qabay, oo aan ahayn aabihii carruurtaasi dhalay.
Afhayeenka oo BBC la hadlay ayaa yiri “Waxaa meydadkii si toos ah ula wareegay Waaxda Baarista Dembiyada ama Qaybta Baarista Dembiyada ee Hoggaanka Baarista Dembiyada Soomaaliyeed, wixii caddeymo oo u baahneydna goobta waa ka qaadatay, waxayna gacanta ku soo dhigeen hooyadii dhashay iyo adeerkii qabay hooyada, walow aabahood ay horey u kala taggeen. Marka labadaas ayaa hadda su’aalo laga weydiinayaa falka, sida uu wax u dhacay.”
Waxa kaloo uu yiri “Carruurta shan jir iyo toddobo jir ayay u dhaxeysaa da’dooda, midi waa shan jir, midna waa toddobo jir. Waa wiil iyo gabar ay hooyo wada dhashay oo ku noollaa Tabeellaha Sheekh Ibraahim (Weydow) meesha loo yaqaano ah ee duleedka Magaalada Muqdisho.”
Cabdifitaax Aadan Xasan, Afhayeenka Ciidanka Booliska Soomaaliyeed ayaa yiri “Hooyada iyo adeerka, qolada uu dhibka ku dhacay ayay ahaayeen, hooyada welwel badan ayaa ka muuqday, laakiin anaga boolis haddaan nahay waxaan eegnaa dembiga intaan baarayno masuuliyadda cid weliba gayska ay ka khuseyso. Hooyada qudheyda masuuliyad ayaa laga rabay oo xannaanada carruurtaasi ah, waxay sheegtay inay adeeg u dirsatay, muddo fogna ay maqnaayeen. Marka carruurta adeeg looga diro dukaan waa la garan karaa, xitaa xilliga ay ku soo laaban karaan. Haddii la waayo saacad, laba saac ama xitaa saddex saac haddii la waayo waxay ahayd in la wargeliyo maamulka degmada iyo laamaha amniga, intaba lama sameynin.”
Cabdifitaax Aadan ayaa intaasi ku daray “Adeerkana waxay ahayd masuuliyad qoyskii, hooyadii iyo carruurtaba uu iska saaro, labadaba masuuliyad darro ayay sameeyeen oo dayacaad ayaa ka dhalatay goobtaas.”
Deegaanka uu dilku ka dhacay ayaa waxaa ku badan qoysaska barakacayaasha oo halkaasi dib u dejin loogu sameeyay.
Previous articleRooble oo Safiirka Emirate-ka kala hadlay xiriirka labada dal (SAWIRRO)
Next articleYuusuf Dabageed oo la kulmay Ra’iisal Wasaare Rooble (SAWIRRO)